Somaliland.Org » ‘Israacii 1960-kii wuxuu ahaa dhalanteed sharci darro ah’
‘Israacii 1960-kii wuxuu ahaa dhalanteed sharci darro ah’
June 15th, 2012 Comments Off ‘Wuxuu la mid ahaa guur meher la’aan lagu wada joogay’
Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiye Ku xigeenka labaad ee Golaha Wakiiladda Md. Cali Yuusuf Axmed, ayaa sheegay in israacii lixdankii ee Somaliland Iyo Somalia uu ku dhisnaa dhalanteed sharci darro ah.
Sidaasna waxa ku sheegay qoraal dheer oo uu maanta soo saaray oo u qornaa sidan:-
“Malintii Somaliland heshay madaxbanaanida 26 June 1960, malintii ku xigtay ee 27 June, golihii xeerdajinta (Parliament)Somaliland waxay saxeexeen xeerkii israaca labada qaybood ? Union of Somaliland and Somalia law ?, oo noqonlahaa aasaaskii israac sharci iyo midnimo siyaasadeed, haddii dhinaca kale ee Somalia saxeexi lahaa. Hase ahaatee taaasi ma dhicin oo dhiggii Somalia ma saxeexin. Sidaa awgeed heshiiskaasi dhinac kaliya ayuu ahaa oo dhinaca kale ee Somalia waxa uu ka noqday wax aan jirin.
Sidoo kale xeer dajinta (Parliament) Somalia July 1 dii waxay saxeexeen ?document? kale oo af talyaani ku qoran oo la magac baxay ? Atto di unione? (Act of union) xeerkani israaca ee ay Somalia soo diyaarisayna, Somaliland ma saxeexin, sidaas ayuu isna dhaqangal ku noqonin.
Isku soo wada duuboo israacaasi waxa uu ahaa mid dhalanteed ah oo sharciga ka fog. Wuxuu la mid ahaa guur meher la’aan lagu wada joogay. Maqaalkan waxaa ugu talo galay dayarta iyo dadka aan taariikhdii israaca Somaliland iyo Somalia aan la socon inay xaqiiqda ogaadaan.”